UN chief Guterres, US President Trump commit to work together to address common challenges – CRM
21 October 2017 – United Nations Secretary-General António Guterres met Friday with United States President Donald Trump and discussed, among others, tensions in the Korean Peninsula and the fight against terrorism.
According toareadout of the meeting, the Mr. Guterres and Mr. Trump discussed UN effectiveness and reform, as well as global issues of mutual concern, including Myanmar, the tensions in the Korean Peninsula, the situation in the wider Middle East, and the fight against global terrorism.
“The two committed to work together to address these and other common challenges in the coming months,” the readout added.
The meeting was held on Friday, 20 October at the White House, Washington, D.C.
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းပဋိပက္ခရဲ့ ဒေသတွင်း အပျက်အစီးပမာဏကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒေသခံမွတ်ဆလင်တွေဟာ Ethnic Cleansing လူမျိုးနွယ်စုလိုက်ရှင်းလင်းတာမျိုး ခံခဲ့ရဖွယ်ရှိတယ်လို့ အဲဒီ ဒေသကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ သံတမန်တွေက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ နေရပ်ကို ဘေးကင်းကင်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်နိုင်မယ့်အခြေအနေလည်း မရှိသေးဘူးလို့ သံတမန်အချို့က ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ သံတမန်အဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မနေ့က ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦးက ပြောပြပါမယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ သံတမန်အဖွဲ့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ရာဒေသ နောက်ပြီး မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဒုက္ခသည်လက်ခံရေးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး၊ မနေ့ တနင်းလာနေ့မှာတော့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဒီ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြန်လည်ရှင်းလင်း သုံးသပ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ခရီးစဉ်မှာ ပါသွားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ […]
နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တို့ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးများအဆင့်ညီလာခံကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ကျင်းပခဲ့ရာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေမှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဌာနကပြောပါတယ်။ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် စိုးရိမ်ရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်ကြောင်း နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တို့ဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အထူးသံမှူးကြီး Sam Brownback က သူ့အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဒေါ်လှလှသန်းက တင်ပြပေးမှာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo တာဝန်ယူကျင်းပတဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ၀န်ကြီးများအဆင့်ညီလာခံကို အင်္ဂါနေ့ကစပြီး ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ အစိုးရအရာရှိတွေ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ အခြေခံလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်အချို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း လူ့အခွင့်အရေးရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး ဘာသာရေးလွတ်လပ်ဆိုးရွားမှုတွေကို ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ကြုံတွေ့နေရာစဉ်မှာ တရုတ်ပြည်အတွင်း လူနည်းစု ၀ီဂါ နဲ့ တခြားမွတ်ဆလင်တွေ ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လကစလို့ ရိုဟင်ဂျာ ၇ […]